Sida loo sameeyo kharashka Halloween gabar 10-12 sano jir ah iyo gabdhaha guriga jooga # Fasallada Master-yada si loo abuuro dhar xanaano, Nurses, Witches, Nuns, Kediska loogu talagalay Halloween
Kuwa kale Fasaxyada Halloween
Qalinka Halloween ee gabdhaha iyo gabdhaha leh gacmahooda - Sida loo sameeyo Kalkaaliyeyaasha, Nuns, Witches, Haweenka Koofurta guriga
Diyaarinta Maalinta Dhamaan Xayawaanku waa dhibaato, laakiin khibrad xiiso leh. Maxaad sameyn laheyd maalinta fasaxa - Kharashka Halloween ee gabar iyo gabar ama nin, maskadaha, qalabka dharka asalka ah, iwm. Dabcan, suuqyada iyo dukaamada waxaad ka iibsan kartaa dharka diyaarka ah ee diyaarka ah ee Witch, Haweenka, Kursiga, Kalkaaliyayaasha, Kursiga, Dhibaatooyinka, Zombies ama jilayaasha kale ee cabsida leh, kuwaas oo sawiradooda la xidhiidha Oktoobar 31. Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan yihiin qiimo, waxayna u eg yihiin mataano. Aad bay ugu fiicantahay inaad sidaas sameyso guriga, adigana gacmahaaga. Haa, waxay qaadan doontaa wakhti, laakiin natiijadu waxay noqon doontaa cajiib ah. Baro sida loo diyaargaroobo xisbiyada "dheelitir" ee xaflad, oo la yaab leh martida la socoshadooda.
Sida loo abuuro dhar ah Halloween 2017 gurigaaga dhexdiisa - Samaynta dhar gabar 10-12 sano oo leh sawir
Bilaw inaad u diyaargarowdid Halloween 2017 oo leh xulashada dharka. Gabadh 10-12 sano jir ah ayaa dharka gaaban ee Princess, Mermaid, Ghost ku habboon. Gabdhaha iyo gabdhaha waaweyn - sawirada Dhimashada Arooska, Boqorka Spades, Zombies, Witches. Adiga ayaa sameeya, adiga oo aan laba saacadood ku shaqeyneynin guriga. Kaliya fiiri silsiladahaaga iyo xargaha, waxaad ka heleysaa dhar duug ah oo aad bilowdid inaad dhar u sameyso maalinta All Saints. Fiiro u yeelo xulashadayada sawirro muuqaal ah oo la diyaariyey 31-ka Oktoobar - taasi waxay kaa caawineysaa inaad doorato mid ka mid ah.
Sida loo sameeyo suunka Ghost for Halloween 2017 - maadada Master-ka loogu talagalay sameynta dharka guriga iyagoo sawir leh
Qeybta ugu fudud ee ujeedka loogu talagalay Halloween 2017 waa dabeecadda Ghost. Waxay ku haboontahay labada gabdhood 10-12 sano, iyo dhalinyaro waaweyn. Dharka noocan oo kale ah ayaa gebi ahaanba dabooli doona wejiga, oo qofka ku dhejinaya wuxuu noqonayaa mid aan la garan karin. Si aad u sameyso dhar, u diyaargarow:
Waraaqda hore ee caddaynta;
Calaamad madow ama calaamadeeye;
Marka, waxaan bilaabi ...
Iska tuur madaxa madaxa qofka aad diyaarineyso warqad ku habboon;
Calaamadee meesha qalabka jeexitaanka
Raadi goobaha indhaha oo ku calaamadee calaamad;
Iska yaree godadka indhaha;
Ku sawir sumadeeyaha afka iyo sanka ama gooyo furfuris si ay u sahlanaato neefsashada;
Haddii aad jarayso xaashida sida sawirka lagu muujiyay iyo xitaa wax yar ku dhuujin "dhiig" (rinji), saameyntu waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan.
Taasi waa dhan!
Qiimaynta Halloween ee gabdhaha leh gacmaheeda guriga - Masterclass oo leh sawir
Samee asalka, ka duwan siyaabo kale oo loogu talagalay dharka Halloween, waad awoodi kartaa inaad gurigaaga ku haysid, gacmahaaga. Waa ku filan inaad ogaatid uun nooca nadiifinta aad rabto inaad naftaada ama gabadhaada ku aragto bisha Oktoobar 31 una diyaariso dhammaan qalabka iyo qalabka wax soo saarka. Gabdhaha iyo gabdhaha yaryar, sawirada Witch, xayawaan qurxoon, Katsu, xaaskii Count Dracula, iwm,
Qiimaha gabadha "Web" iyada oo la socota gacmaheeda - Fasalka Master-ka ee dharka lagu tolay dharka Halloween oo sawir leh
Nidaamka noocan oo kale ah qaabka looxyada waxay noqon kartaa qayb ka mid ah dharka jilitaanka ama noqdaan kuwo madax-bannaan oo madax-bannaan. Si aad u soo saartid waxaad u baahan doontaa:
Dharka jilicsan - laga bilaabo 1 ilaa 2.5 m (waxay kuxirantahay koritaanka gabar ama gabar);
Xadhig (qiyaastii mitir);
Cabbiridda cajalad ("centimeter").
Ku duub dhuxul (ama waxyaabo kale) afar afaraadna ku dheji jeexitaanka webka mustaqbalka mustaqbalka ee web-cobweb. Sawirku wuxuu muujinayaa taxanaha tallaabooyinkaaga.
Iska yaree saldhigga la jarjaray si ay u noqoto mid la isku laabo qeybtii. Ku sawir wareegga yar yar ee curkaanka (cutogeynta mustaqbalka ee madaxa) iyo sawirro ku yaala goynta shabakadda qaabaysan.
Raac tallaabooyinka lagu muujiyay farriinta sawirka ee taxanaha. Ku dheji cajaladda qoorta.
Waa waqtigii aad u tagi lahayd xisbiga!
Kalkaaliyeyaasha diyaarka ah ee carnival Nurses for Halloween
Markaad diyaarinayso Halloween, ka feker waxa sawirku kuugu haboon yahay in ka badan kuwa kale. Waxaa dhici karta in bisha Oktoobar 31 aad rabto inaad ku jirtid doorka Dhiigga Dhiiga ka yimaada filimka naxdin leh? Maaha wax adag in la sameeyo dhar iibsashada noocaas ah; Kharashka ku baxa wuxuu noqon doonaa mid aad u yar. Habka ugu fudud ayaa ah in la helo dhar caddaan ah oo gaaban oo leh jilbaaxo iyo gacmo gacmeed oo u eg dharka xayawaanka ee dharka gacan-gashiga ah, ka iibso siriin badan oo farmashiyaha ah, buuxi rinjiga cas oo si fiican u nadiifiya amar ku habboon "dhiig".
Kalkaalisada dharka ee Halloween
Ha ka helin iibka jaakad cad, isticmaal shukumaan cad oo dheer oo leh gacmo gaaban. Waa kufiican tahay sameynta kharashka kalkaaliyaha ee Halloween. Si aad u abuurto muuqaal cajiib ah oo ah walaac aan macquul ahayn, ku dheji jilbaha rinjiga cas iyo jeex meelo badan.
Nolosha Nunsoodka ah ee loo yaqaan 'Halloween party'
Miisaanka Monk waa mid ka mid ah dharka fudud ee cabsida leh ee loogu talagalay xisbiyada Halloween. Fikradda ah in la abuuro sawir la mid ah Maalinta All Saints waxay ka kaceen dad badan kadib markii daawashada filimka naxdinta leh "The Nun." Sida laga soo xigtay sheekadiisa, abbess kasta oo suurtagal ah ayaa ka dhigaysa ardaydeeda inta lagu jiro nolosheeda, iyo, dhimashada, waxay sii waddaa inay gabdhaha raacdo.
Halloween Costumes for Nuns
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad abuurto kharashka Monashki - dhar badan oo madow. Hantid ugu yaraan maalmo yar ka hor Halloween - markaa waxaad heli doontaa wakhti aad ku sameyso mid ka mid ah noocyada kala duwan ee ka soo horjeeda midabtakoorka iyo naxariis darrada ee gabdhaha 'boarding school'.
Sida loo sameeyo Qiimaha Witch for Halloween 2017
Witches ayaa ah kuwa ugu caansan dhedigga dharka ee Halloween. Si aad u sameysid dharka saxda ah waa mid sahlan - waxaad isticmaali kartaa dhar dheer oo gaboobay. Dhibaatada halkani waxay ku jirtaa meel kale - raadinta ama sameynta sawirro ku haboon oo khaas ah. Tani waa koofiyado madow, iyo xaaqin dheer, iyo cirridka gorgortan. Sidee loo sameeyaa Dhamaan Saints Day 2017? Talooyinkayaga ayaa ku caawin doona.
Wicidda Qodobka Naqshadaynta Waaweyn ee Halloween 2017
On Halloween, waxaad u rogi kartaa Witch wanaagsan ama shaki, ka soo qaadashada dharka habboon iyo dharka. Qalabka loo baahan yahay waa halkan xargo iyo koofiyad. Si kastaba ha noqotee, gabadh yar, suuf iyo timo timo ayaa sameyn doona - dheji weyn iyo timo cufan. Sanduuqa waxaa lagu sameyn karaa adoo xiraya dherer dheer oo ka soo jiidaya alaab alwaax ah ama ulo laan ah, iyaga oo ku xiraya xadhig. Qeybta sawirka waxaa si sahlan loo sameyn karaa adigoo ku dhejinaya mugdiga ka soo duubaya maro madow ah ilaa qafiska duqda. Ha ka baqin inaad u maleyso - tani waa waxa ugu muhiimsan ee abuuraya kharashka bisha Oktoobar 31!
Kharashka Dharka ee Koofurtada on Halloween gacmahooda
Munaasabadani waa nooca ugu fiican ee loo yaqaan 'Halloween' - waa mid ka mid ah tarjumaadda muuqaalka, inkastoo tafsiiro badan oo sawir ah, ayaa ugu caansan waxaa ka mid ah Cat Woman, oo loo yaqaan 'Michelle Pfeiffer' ee "The Return of Batman" by Tim Burton. Isku day oo samee suunkan gacmahaaga.
Sida loo sameeyo dharka miisaska caruurta ee Halloween gacmahaaga - Fasalka Master oo leh sawir iyo tilmaamo
Habka ugu fudud ee loo abuuri karo suunka Catwoman waa in la helo gogol-xaadhyo dhar-gaaban oo dhaadheer iyo shaashado isboorti oo leh gacmo dheer oo isku mid ah. Haddii dharka noocan oo kale ah aan la helin, dufaan iyo dhar madow oo jilicsan ayaa sameyn doona. Hadda u gudub si aad u dhamaystirto dharka.
Xasuuso, dharka halyeeyada Michelle Pfeiffer waxay ahaayeen khadado cad oo muuqda? Samee iyaga adigoo codsanaya qalabka jilicsan ee leh cad cad (fiiri sawirka).
Ka dhig buugga madaxa Cat sida sidan:
Qaado suufka gaboobay ee madow;
Iska yaree dhinaca hoose ee surwaalka. Qeybta la gooyey waa inay ahaataa mid dheer oo ku filan si ay u daboosho nuskaaga wajiga;
Qaado gabal cadaan cad oo ku sawiran maskaxda mustaqbalka ee isha;
Iska yaree laba god oo indhaha ah, cirbadda iyo nalka ka dibna qallaji qaybta sare ee maaskarada, dharbaaxo (isticmaal dharka haray). Halkii aad ka noqon laheyd, waxaad isticmaali kartaa kabo leh "dhegaha" iyo maaskaro.
Ha iloobin ku saabsan daboolka - ku duub silig cufan leh dhogor ama dhoobo midab madow, ku dheji xadhig iyo dhajinta dharka.
U tag macallinka oo samee nikad - sameyso ciddiyo dheer oo weydii in ay daboolaan iyaga oo leh muraayad madow.
Tag qaybta - suunka bisad waa diyaar!
Markaad sameysey gacmahaaga, jawiga caadiga ah ee guriga, kharashka Halloween ee gabdhaha iyo gabdhaha, waxaad u eegi doontaa cajiib ah 31ka Oktoobar! Xulo sawirro ah Nurses, Nuns, Witches ama Koofiyadaha Dumarka, iyo sidoo kale, iyo sida loo sameeyo munaasabadda, waxaa laguugu soo diri doonaa sawiradeena iyo fiidiyooga sharaxaad.
Sida loo sameeyo kharashka Halloween gacmahaaga: tilmaamaha sawir iyo muuqaalka
Qurxinta Halloween loogu talagalay gabdhaha iyo gabdhaha - xayawaanka, vampire, kabadhaha, bisadaha iyo caruusadaha
Farshaxanka Halloween 2017 ee loogu talagalay carruurta laga helo warqad, balaastiig iyo bocorka - Sida guriga loogu sameeyo farsamooyin gacmeed ee iskuulka iyo xanaanada
Xusuusashada Halloween ee loogu talagalay carruurta, gabdhaha iyo wiilasha, guriga lagu sameeyo gacmohooda (abaabul sawir-qaad ah oo tallaabo tallaabo ah)
Marka Halloween 2016 lagu dabaaldego: taariikhda
Jimicsiga jimicsiga ee caruurta
Sida loo Isticmaalayo Caanaha Jadeecada
Pasta leh Mascarpone
Sidee ayaad naftaada u daryeeli kartaa haddii aad ilmo leedahay
Angina: jirada, ilaha infakshanka, wadooyinka gudbinta, calaamadaha
Gemi ka quince
Xulo magaca cunugga by aabaha
Calaamadaha jirka iyo dabeecada xayawaanka
Dhuxulo hilibka iyo baradhada
Sidee looga takhalusaa dareenka hooyada ee dembiga?
Isticmaalka saliid muhiim ah ee yar yar
Ku soo dhawow hadalka khadka dugsiga Sebteembar 1 laga soo bilaabo maamulka iyo ku-xigeennada, madaxa dugsiga ama macallinka
Miraha iyo khudradda waxtar leh si loo yareeyo sonkorta dhiigga
Yaanyada la dubay
Recipe ee salad Caesar delicious